ज्योतिषशास्त्र अनुसार वुधबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ? जानी राखौ
जुलाई 24, 2019 जुलाई 24, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment वुधबार
वुधबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ? ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ ।
के तपाई कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ वा गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने दिन, बार, नक्षत्र र राशी सवै मिलाएर काम गर्दा तपाईलाई सफलता मिल्छ । त्यसैले मानिहरुले कुनै पनि शुभकार्य गर्दा दिन हेराएर मात्रै गर्ने गरेको पाइन्छ । हिन्दुधर्म शास्त्र अनुसार तपाईको खानपान, हिडडूल, कामको शुरुवात लगायतका विषयहरुमा तपाईले बार र समयलाई ख्याल गरेर यी काम गर्दा फाइदा पुग्छ। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुपर्दा सवैभन्दा पहिले गणेशको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार वुधबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ भन्ने बारेमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस बारमा चातुर्य, दक्षता, पुण्य आर्जन, अध्ययन गर्नु, शास्त्र सेवा गर्नु, शास्त्र चिन्तन गर्नु, चित्र लेखन गर्नु, वास्तु कला, नोकरी गर्नु, बादबिबाद गर्नु शुभ मानिन्छ ।
← स्वास्थ्यको लागि नासपाती खानुका फाइदाहरु
औषधीको रुपमा वंशलोचनको प्रयोग →
One thought on “वुधबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ?”
Pingback:वुधबार यि काम गर्दा सफल गर्दा सफलता मिल्छ ? - खबरकाे सच्चा पहरेद्धार